China 3.7v 2600mah Lithium li-ion အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် ICR 18650 Li ion Battery Cell နှင့်တရုတ်စက်ရုံစျေးနှုန်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသူ | SOSLLI
လျှောက်လွှာ & Solutio
မော်ဒယ်အမှတ်။ : SSL-ICR3S12P18650E25
နိဒါန်း: ၃.၇ ဗို့ ၂၆၀၀ mAh Li-ion လီသီယမ်ဘက်ထရီပလပ်စတစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီး၊ တယ်လီကွန်းပြန်ပေးစက်၊ အိမ်အသုံးအဆောင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ကစားစရာများ၊ ကစားစရာများ၊ gps Tracker, LED မီးများ၊ မီးခွက်၊ လုံခြုံရေးကင်မရာ၊ လျှပ်စစ်ဘက်အစရှိသဖြင့်
၁။ ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင် - ခြစ်ရာ၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်း
2. ညစ်ညမ်းမှုကင်းသော၊ သေးငယ်သောခုခံမှု၊ ပေါ့ပါးမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊
3. အပူချိန်နိမ့်ခြင်း: -40 ℃
၆။ ရေအောက်ရှာဖွေရေးကိရိယာ၊ မီးချောင်း၊ LED အလင်း၊ မီးလုံး၊ 3D ပရင်တာ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊
7. OEM / ODM လက်ခံနိုင်ဖွယ်
လက်ခံနိုင်သော 8.Battery pack
သင်အခြားစီးရီးဘက်ထရီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါပုံစံမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ ငါတို့ဆီလာလည် ကုမ္ပဏီအကြောင်း နှင့်သင်၏မေးလ်လိပ်စာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနာရီအတွင်းသင့်ကိုငါပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်ထရီတစ်ခုစီကို PE (သို့) အခြား insulation bag သို့မဟုတ် tray ဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီးတစ် ဦး ချင်းစီကိုအခြားသူများမှကာကွယ်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရေကြောင်းသယ်ဆောင်သူများတောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပုံးထဲထည့်ပါ။ သင်တောင်းခံသည့်အတိုင်းဘက်ထရီတစ်ခုချင်းစီအတွက်အထူးအတွင်းပိုင်းထုပ်ပိုးမှုကိုလက်ခံပါသည်
ဆဲလ်များအတွက် 1. PVC အထုပ်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် 80mAh မှ 7000mAh အထိသိုလှောင်နိုင်သော Batery Cell များ၏မော်ဒယ် ၉၀ ကျော်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုမှာဘက်ထရီဆဲလ် ၃၀၀,၀၀၀ နှင့်စုစုပေါင်းဘက်ထရီ ၄၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရေအောက်ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာအတွက်အပူချိန်နိမ့်ဘက်ထရီ 18650 2600mAh 3.7V lithium ion ဘက်ထရီဆဲလ်
Packig - ဘက်ထရီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာခြင်း
ရှေ့သို့ ဂေါက်သီးလှည်းအတွက် 48V 20Ah Li-Ion လီသီယမ်သည်ဘက်ထရီပါဝါလျှပ်စစ်စက်ဘီးဆိုင်
နောက်တစ်ခု: POS စက်အတွက် 18650 3.6V 2600mAh Samsung Lithium Battery Pack
20ah လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ, 3.6v လီသီယမ် -Ion ဘက်ထရီ, ပါဝါဘက်ထရီ Pack ကို, ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီ, လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီဆဲလ်များ, ပါဝါ Lithium ဘက်ထရီ,